ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအမျိုးအစားများရှာဖွေနေတဲ့
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 19 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အမျိုးသမီးများကဘယ်လိုမျိုးယောက်ျားရှာဖွေနေပါသည်? ဒီအဖြေကိုမျိုးစုံနှင့်အတူတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်. တချို့ယောက်ျားတွေပြီးပြည့်စုံသောအသေကောင်တစ်ဦး diva စိတ်သဘောထားနှင့်လိင်ဆက်ဆံဗုံးများကြည့်ရှုပါ, တခြားသူတွေအတွက်တစ်အဲဒါကပျော်စေပျက်စေသဘောသည်မိန်းမထက် ပို. ဆွဲဆောင်မှုရှိစဉ်အခါ. တချို့ယောက်ျားတွေသူတို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်လိုအပ်, ကိုယ့်ဖို့အသုံးပြုသူတို့ရဲ့မိခင်နှင့်တူ. နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လွတ်လပ်ရေး၏အလယ်အလတ်သဘောအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာများအတွက်သူတို့အားလည်းရှိပါတယ်. အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေကုန်ကြပါပြီဟန်ဆောင်မပါဘဲ, ဤနေရာတွင်လူအတော်များများမှာရှာဖွေနေတဲ့အမျိုးသမီးခြောက်မျိုးရှိပါတယ်:
ဒီဒီနေ့ခေတ်ယောက်ျားဆွဲဆောင်ဖို့ပိုများပါတယ်သောအမျိုးသမီးများအမျိုးအစားများကိုထုတ်တွက်ဆရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါမည်သူမဆိုရဲ့စိတ်ထဲလာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပထမဦးဆုံးမျိုး. အဲဒါမှန်ပါတယ်: လိင်ဗုံးဖြစ်စေမည် 99% သူမလမ်းပေါ်ကဆင်းသာသွားလာသည့်အခါလူတို့က၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းလှည့်. ဒါဟာဆွဲဆောင်မှု၏အလွန်ပညတ်တရားတော်ကိုင်! သို့သော်, သင်သည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေစိတ်ချစွာနိုင်: ဤလူတို့ကိုရှာဖွေနေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသမီးများမဟုတ်! တကယ်တော့, ရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှာဖွေနေစဉ်အခါ, တချို့ယောက်ျားတွေပင်လိင်ဗုံးကိုရှောင်ကြဉ်ပါလိမ့်မယ်.
သင်ကဒါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားလျှင်: ယောက်ျားလုံးဝတက်ပေါက်ကြဘူး. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဘဝတွေကိုသူတို့ရဲ့ကလေးကစားစရာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အတူဆော့ကစား. ဤသူသည်သင်တို့ကိုခရီးဦးကြိုတိုင်းတစ်ခုတည်းယောက်ျားလောက်မတည်နေစဉ်, သင်ကလေးတစ်ယောက်လိုအမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်ခံရသူရှိပါသည်သင်သိသင့်သည်, ဘဝမှာမိမိတို့အကောင်းမြင်သဘောထားကို, အခန်းထဲကိုပေါ့ပါးစေသည်ဟုသူတို့အဲဒါကပျော်စေပျက်စေသဘောဖြင့်ပြုံး. သက်ကြီးယောက်ျားတွေမကြာခဏတွေအများကြီးအသက်ငယ်အမျိုးသမီးများကဆွဲဆောင်လျက်ရှိသင်သည်အဘယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက်တို့သည်လည်းအံ့ဩရှိသည်? ဒါကအကြောင်းပြချက်ရှိနိုင်ပါသည်!
ဒါဟာအမျိုးသမီးတို့သည်သူတို့အဘပုံကိုရှာနေဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်, သူတို့အမေရဲ့မိတ္တူအဘို့နှင့်ယောက်ျား. အဘယ်ကြောင့်? စိတ်ပညာရှင်ကြီးပြင်းစဉ်အပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းပုလ္ / ဣတ္ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့် ပတ်သက်. သင်တို့ရှိသမျှကိုရှင်းပြပါဦးမည်. ထိုမှတပါး, ယောက်ျားထွက်ရှိသောသူရှိတယ်, ဖြစ်ခြင်း misogynists မပါဘဲ, သူတို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပြုစုစောင့်ရှောက်သောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူသူတို့၏အသက်တာကိုဝေမျှတူ, ချက်ပြုတ်ရန်နှင့်သန့်ရှင်းရေး. အစ "အိမ်ရှင်မ" အဖြစ်လူသိများ, အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အမိကဲ့သို့ type ကိုလူအများတို့သည်ရဲ့စံပြဖြစ်.
သတိထားပါ: မြို့သားတို့သည်သင်၏အများဆုံးဣတ္နှင့်အရှိဆုံးခြမ်းပြီးနောက်အမြဲတမ်းမဟုတ်! သူတို့ရဲ့ပြက်လုံးတွေပြက်နားလည်သဘောပေါက်သူတစ်ဦးကောင်း PAL စေတနာကိုတန်ဖိုးထားသောသူတို့အားရှိပါတယ်, အားကစားပရိသတ်များနည်းတူမိမိတို့က preferences များတူညီ, နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း console ကိုကိုင်တွယ်ရန်ဘယ်လောက်သိတယ်. မီးဖိုချောင်ထဲမှာအမျိုးသမီးရဲ့အရပ်ဖြစ်၏? မလိုအပ်! ဒီလူတွေများအတွက်, စံနမူနာမိန်းမသည်အတူတူပင်ဘောလုံးအသင်းကိုထောက်ခံ, နှင့်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးကားပြိုင်ပွဲဗီဒီယိုဂိမ်းအတွက်ကောင်းတစ်ဦးရန်ဘက်ပြုသောသူသည်. သို့သော်, အရာအိပ်ခန်းထဲမှာကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ,, သင်ကအအေးခံလုပ်ရပ် drop ရှိသည်နှင့်သင့်အများဆုံးဣတ္လှည့်ကွက်ထဲကယူစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်.
အမျိုးသမီးများနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏ aura ဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဝန်းရံလို, အနည်းဆုံးအရမ်းအစအဦးမှာ. လူအများတို့သည်အဘို့လဲကျ, ဒါပေမယ့်နက်နဲသောအရာကိုပျောက်တစ်ချိန်က, အမှုအရာငြီးငွေ့စရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်, သတိထားပါ! သင့်ရဲ့ကောင်လေးပထမဦးဆုံးနေရာမှာသင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နားမှာဆွဲဆောင်ခဲ့လျှင်, သင်သည်တလျှောက်ကအပေါင်းတို့၏အချို့သောစောင့်ရှောက်ဖို့လိုလိမ့်မည်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ရခြင်း၏လက်ျာလေ့ကျင့်ခန်း, နှင့်ခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစား, ဒါပေမယ့်သာအချိန်. တစ်ဦးကအချိန်ကြာမြင့်စွာကစုစုပေါင်းနက်နဲသောအရာကိုသင့်သောသူသည်သင်တို့အထံတော်မှအရာတစ်ခုခုပုန်းအောင်းနေကြသည်ထင်စေနိုင်သည်, အဘယ်သူမျှမက likes.
အမျိုးသားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်တစ်ခုတည်းပြောင်းရွှေ့စေနိုင်သောသူမဟုတ် clingy အားကိုးအမျိုးသမီးမကြိုက်ပါဘူး. အများစုကယောက်ျားတွေပိုပြီးလိုအပ်လျှင်မီးသီးသူ့ကိုယ်သူပြောင်းလဲပစ်နိုင်သူတစ်ဦးလွတ်လပ်သောမိန်းမအားဆွဲဆောင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်. သို့သော်, သင့်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးလုပ်ရပ်မင်းကိုမသတိထားဖ​​ြစ်, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ခံစားရနိုင်တယ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုသင့်အသက်တာ၌သူ့ကိုမလိုအပ်ပါဘူး. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် on ကိုလေးလံအိတ်သယ်ဆောင်ရန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်ရင်တောင်, သင်အနေဖြင့်အချိန်တိုင်းအားမိမိအကူအညီကိုတောင်းခံဖို့စဉ်းစားစေခြင်းငှါ,.